My Buddy Joins the Revolutionary Army (June 13/2021) – PVTV Myanmar
တခုခုကို အားမရသလို ခံစားရပီး
2021-06-13 at 11:31 AM
2021-06-13 at 11:39 AM
2021-06-13 at 11:59 AM
mi hmoo says:
2021-06-13 at 5:00 PM
2021-06-13 at 5:58 PM
ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ပါစေ G Z လေးများအားလုံး ပြည်သူတွေအားလုံး စောင့်မျော်နေလျက်😢😢
2021-06-13 at 7:31 PM
2021-06-14 at 3:39 AM
| | | အ​ရေး​တော်ပုံ မုချ ​အောင်ရမည် | | |
Thant Thant zin says:
ကိုငှက် အမျိုးသားအရေးကြိုးပန်းခဲ့ကြတာ သိခဲ့ရတော့ အံ့အားသင့်ခဲ့ရသလိုမျိုး လေးစားအားကျရတဲ့
Brother တို့ ရဲ့ကြိုးစားအားထုပ်မှုတွေ အောင်မြင်အထမြောက်ပါစေ။
2021-06-14 at 11:09 AM
ရိုဟင်ဂျာ…ဆိုတာ…ဘဂ်လား ဒေ့က ကုလား တိုင်းရင်း သား
ရခိုင် ကိုဝင်လာပြီး…စာရင်းငှား လုပ်ပြီး…ပေါက်ပွား လာတာ..
အမေရိကန် မှာ…ပွားများ လာတဲ့
ရခိုင် တွေက..သိပ်မပွား ဘူး
ရိုဟင်ဂျာ တွေက..မူဆလင် အယူတိုင်း..သားဆက်မခြား…ထင်တိုင်း ပွားများ တယ်..
ရွာ တရွာ မှာ..ရခိုင် ၁၀ ယောက်
ရိုဟင်ဂျာ ၁၀၀…ဖြစ်လာ တယ်..
ရိုဟင်ဂျာ က…ရခိုင် မလေးတွေ ကို မုဒိန်း ကျင့်ရာက..စပြီး
ရခိုင် – ရိုဟင်ဂျာ..ပြဿနာ စတယ်..
ရွာတွေမှာ…လူများစု ရိုဟင်ဂျာတွေ က..လူနဲစု.. ရခိုင်တွေ ကို အစုလိုက် သတ်ဖြတ် ပြီး…ရခိုင်မရှိ တဲ့..ရိုဟင်ဂျာ ရွာတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်တယ်..
ရခိုင် ကိုကာကွယ် တဲ့…ရဲစခန်းတွေ ကို ဝင်စီး ပြီး..လက်နက် ယူတယ်..ISIS. ..ဖြစ်လာဖို့ ဦးတည်
မြန်မာ စစ်တပ်.. လွှတ်ပြီး..ပွဲကြမ်း တယ်..မြန်မာ အများစု က
မြန်မာ့ တပ်မတော် ကို ကြိတ်ပြီး ကျေးဇူးတင် နေတယ်..
ရိုဟင်ဂျာ တွေ..ဘဂ်လား ဒေ့
Rufugee. .စခန်းမှာနေ တယ်..
လူ့ အခွင့်အရေး ပါ…တစာစာ.. အော် နေတဲ့..ဘယ် အနောက် နိုင်ငံ ကမှ..ရိုဟင်ဂျာ ကို ခွဲမယူ ကြဘူး…
AA. .စစ်တပ် ပေါ်လာ တယ်
ရခိုင် လူမျိုး ကိုကာကွယ် ဖို့
မြန်မာ့ စစ်တပ် အနိုင် ကျင့်တာ မခံနိုင် တော့ သလို…ရိုဟင်ဂျာ တွေ
နောက်တကြော့ ပြန်ပြီး..ရခိုင်တွေ ကို လာသတ်ခြင်းမှ ကာကွယ် ဖို့…
မြန်မာ တပြည်လုံး ရဲ့ 85% က..တရုပ် ကို မုန်းသလို…ရိုဟင် ဂျာ ကို လဲမလို လားဘူး..
RFA. .BBC. .သတင်းထောက်တွေ က…NUG. .ဆီ ဂျင်းလာ ထည့်တယ်….
NUG. ..ဖြေရမှာ.. ရှင်းရှင်းလေး..
ရိုဟင်ဂျာ ကို လက်ခံ ရ မယ့်..
ပြည်နယ်/တိုင်း တွေရဲ့…ပြည်သူ့ ဆန္ဒ.. ရယူပြီး တော့
တော်လှန် ရေး အောင်မြင် ပြီး မှ
ပြည်သူ့ ဆန္ဒ… အတိုင်း ဆက်လုပ် သွား ပါမယ်.. ဒီလို သောင်မတင် ရေမကျ..ဖြေရင်..
NUG အပေါ် ..မြန်မာ.. အများစု… ရခိုင်…အများစု ရဲ့ ..ထောက်ခံ ချက်ကို…မထိခိုက် မနစ်နာ နိုင်ပါ…